Kule minyaka embalwa edlule, umbuzo onjani imoto ephephile, buya ngokuya ezibalulekile. Futhi akumangalisi, ngoba izibalo zezingozi zomgwaqo sikhulela njalo, okwandisa ingozi izingozi, nezinye izinkathazo eziningi. Ngakho-ke, abakhiqizi imoto, esikhundleni salokho, zama ukwenza yonke imizamo ukuqinisekisa ukuthi imoto ephephe kakhulu emhlabeni kwaba nje umkhiqizo wabo. Ngenxa yalesi sizathu, izilinganiso ezahlukene nocwaningo ngonyaka, ebonisa ezingeni lamanje ukuphepha lolutsite imoto. Kulesi sihloko sizohlola lokho imoto ephephe kunayo yonke emhlabeni okwamanje.
indawo Okokuqala kule simo yiso kanye lesi ibhizinisi sedan-German. Ngesikhathi restyling zokugcina onjiniyela alalelwa hhayi kuphela ukubukeka kwangaphandle umshini, kodwa futhi izinga layo sokuphepha. Imodeli entsha usuphothuliwe ne izinhlelo entsha yokuvikela yekwentiwa kusukela imivimbo ku ukushayisana. Lolu hlelo ubusuku buka, kanye nokuqapha ukusebenza ezibukweni, ngisho umsindo isixwayiso umshayeli ukungqubuzana kungenzeka. Ngakho-ke, kuba "Audi-A6" ibekwe njengoba imoto ephephile 2013.
"BMW" 5 uchungechunge
indawo Okwesibili, kakhulu "German" kuthatha kule isilinganiso. Entsha "BMW" 5 uchungechunge kuyahlangabezana nezindinganiso zokuphepha elawula kunazo. Ngaphezu esicamelweni zakudala kanye 3-iphuzu ibhande, lezipho ezintsha ifakwe "ukhaliphile" izibani oluhambelana futhi ukushayisana ukugwema uhlelo. Njengomhlaba "Audi", entsha "Boomer" ifakwe uhlelo embonweni wasebusuku, ezingasetshenziswa kakhulu ukunciphisa ingozi izingozi.
Ivala ezintathu crossover entsha Infinity EX35. Nakuba akusiyo imoto ephephe kunayo yonke emhlabeni amazinga ethu, kodwa ifakwe izinhlelo zokuvikela zakamuva kweqembu electronics, okuyinto, njengoba ezimweni langaphambilini, uxwayisa umshayeli ukungqubuzana kungenzeka. Lapho isivivinyo ukuphahlazeka "Infinity-EX35» nayo labetibambile phakathi abaholi.
"Merced ne" E-Class
Futhi futhi phakathi ephephile phambili amaJalimane angasiboni. Nakuba kuyinto exakayo ukuthi wayengumuntu endaweni yesine. Ngokungafani "Audi", entsha "Mercedes" uye wahlela futhi elawulwa ukuhamba umshini nge zokuqapha isiyingi. Futhi, electronics smart ngokuzenzakalelayo uhlole lizinga ukozela komshayeli.
Isimanga siwukuthi kodwa imoto umgibeli "Volvo", usukwazile ukuzakhela isisekelo njengoba imoto ephephe kunayo yonke emhlabeni amashumi eminyaka, kulo nyaka zibalwa indawo 5th kuphela kule simo. sedan Igcine ukubuyekezwa khona ukubukeka ekhangayo hhayi kuphela, kodwa futhi eziningi izinhlelo zokuphepha ezengeziwe. Ngaphezu amadivaysi, okuyinto ukuxwayisa umshayeli indawo abayizimpumputhe, "Volvo-S60» ifakwe izibani oluhambelana ukuthi ngokuzenzakalelayo ukushintshela ukukhanya likude eduze, kuye ngokuthi izimo zomgwaqo. Ngaphezu kwalokho, "skandinavets" has a isethi olukhethekile izinhlelo ukuthi wazise umshayeli yokukhathala yakhe. Uma umuntu ulele at kwesondo ngemva kwemizuzwana embalwa kuleli gumbi a klwiklwiza elikhulu, okuzokwenza ugcine zengozi.
"Toyota Umqhele Award" - ikhwalithi nomkhiqizi Japanese
Ukuxilonga of eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa injini - ngakho ukuthi kubalulekile?
Mazda 121: izici jikelele we izizukulwane ezintathu compact imoto Japanese
Gearbox AMT - ke ... gearbox AMT: incazelo, isimiso isinyathelo futhi Ukucaciswa
Vaz-2107: esikhundleni gasket isilinda ikhanda. Incazelo kanye izici inqubo
Ukupheka kweSwitzerland Swiss Oak: ukubuyekezwa kwamakhasimende, izici & ububanzi bomkhiqizo
Florence Isikhumulo sezindiza: indlela ukuya edolobheni?
Wolf ukuzixakekisa: ukuqagela mayelana Russia
Lapho ukutshala Sorrel: nezinsuku ukutshala elilungile
Ngingaqinisekisa kanjani embhedeni ingane ngezandla zakhe
Yini ukugqoka nge jeans ukubheka wemfashini?